သင်၏ Xbox One controller ကိုသင်၏ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ ငါက Mac ကပါ
နောက်ဆုံးတွင် Xbox One Controller ကိုသင်၏ Mac နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်
Miguel အိန်ဂျယ် Juncos | | ပစ္စည်းများ, Apple, လဲ tutorial
မကြာသေးမီကသင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြသခဲ့သလဲ PS4 Controller ကိုသင်၏ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ ကစားရန် အများကြီးပို ergonomic ပုံသဏ္.ာန် OS X ပေါ်ရှိဂိမ်းမျိုးစုံအတွက်။ သို့သော် Sony Controller ဒီဇိုင်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်သင့်အာရုံကိုအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ အစောပိုင်းက Xbox One Controller ဒီဇိုင်းကိုကစားရန်ပိုနှစ်သက်သည်။ Xbox One Controller အသစ်ကိုအသုံးပြုလိုပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီလိုလုပ်ရန်ပြnoနာမရှိသော်လည်း PS4 Controller နှင့်မတူသည် Xbox One Controller ကို USB cable မှတစ်ဆင့် Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် PS4 Controller ရှိပါက Plug and Play မှတဆင့်၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်တရား ၀ င်မဟုတ်သောစီမံကိန်းများက၎င်းအားအားလုံးသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအများစုကိုသိမ်းဆည်းထားစဉ်ကျွန်ုပ်တို့အား Controller ကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ FranticRain မှတီထွင်ခဲ့သော Xone-OSX စီမံကိန်းကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ။
အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုကိုမှတ်မိစေရန်စနစ်ကိုဖွင့်စေသော software ကို install လုပ်ရန် Xone-OSX စာမျက်နှာသို့သွားပါ ဒီ link ကတဆင့် ထည့်သွင်းပြီးသား version ကို download လုပ်ပါ။ installation package ကို run ပြီးမျက်နှာပြင်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ပြီးတာနဲ့အရာအားလုံးဖြစ်ပါတယ် တပ်ဆင်ထားကျနော်တို့ restart လိမ့်မယ် အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့်မီးစစ်ဆေးရန်ကိရိယာများ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်ုပ်တို့မြင်ရမည့် system preferences panel သို့သွားပါ အပိုင်းအသစ် Xone Controller ဟုခေါ်သည်ကို install လုပ်ပြီးခလုတ်များ၊
အဆင်မပြေသောကွောငျ့ဖွစျသညျ အားလုံးဂိမ်းများနှင့်သဟဇာတမဟုတ် 100%, ဒါကြောင့်အချို့အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကြိုးစားခွင့်ရခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးမှာသူတို့ဟာအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အချက်အလက်များသယ်ဆောင်မှသာ USB ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပါက၎င်းသည်ဘက်ထရီများသို့မဟုတ်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းစရာမလိုတော့ကြောင်းသတိပြုရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » နောက်ဆုံးတွင် Xbox One Controller ကိုသင်၏ Mac နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်
ဟယ်လို! .zip package ကို download လုပ်သည့်အခါ REEDNE.md ဖိုင်တွင် installer ကို run ရန်ပြောပါသည်။ ဒါပေမဲ့ installer ဆိုတာဘာလဲမသိပါဘူး ဖိုင်တွဲ (၂) ခုနှင့်ဖိုင် (၃) ခုပေါ်လာသည်။ (.md မှ ၂ ခုနှင့်လိုင်စင်ဖြစ်သောနောက်တစ်ခု ... ) ပေါ်လာမည်ဆိုပါကသင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်လျှင်၎င်းသည်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
Mac အတွက်အလျင်အမြန်စပိန် - အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်
EZCast သည် smart tv အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်